डेटा विज्ञान प्रमाणन पाठ्यक्रम मा भारत | किन विज्ञान विज्ञान? «यो
डेटा विज्ञान प्रमाणन पाठ्यक्रम मा भारत | किन विज्ञान विज्ञान?
डाटा विज्ञान पाठ्यक्रम के हो?
डेटा विज्ञान कार्यक्रम छनौट गर्दै गर्दा
भारतमा डाटा विज्ञान पाठ्यक्रम
चरणका लागि चरण निर्देशनहरू:
डेटा संचालित विज्ञान एक रेल हो जसले जानकारीबाट बहुमूल्य जानकारी हान्न तार्किक प्रविधि र प्रक्रिया समावेश गर्दछ। यो जानकारी जो बाहिरिएको छ संरचित वा असंगत हुन सक्छ। डाटा विज्ञान अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमहरू छन्। हामीलाई तपाईंसँग उपयुक्त छनौट कसरी गर्ने भनेर बुझ्न मौका दिनुहोस्।
आफ्नो अनुभव थाहा पाउनुहोस्: कार्यक्रम को चयन गर्नु अघि तपाइँको निर्देशक आधारलाई विचार गर्नु पर्छ। क्षेत्रमा आधारभूत शिक्षा र क्षमता बिना, तपाइँ कुनै पनि पाठ्यक्रममा भर्खरै स्वीकार हुँदैन। अधिकांश संस्थाहरु को डेटा विज्ञान प्रमाणन पाठ्यक्रमहरुमा शामिल होने को अनिवार्य सूचीबद्ध गर्दछ। विभाजनको साइट खोल्नुहोस् कि तपाइँको अनुभवले पूर्वनिर्धारित समन्वय गर्दछ कि छैन।
तपाईंको उद्देश्यहरू पहिचान गर्नुहोस्: पाठ्यक्रम चयन गर्नु अघि, तपाईंको उद्देश्यहरूको एक अनावश्यक समझ राख्नुहोस् वा तपाईंलाई सिक्न आवश्यक हुन सक्छ। सूचना विज्ञानमा धेरै एकाग्रता पर्दछ र तपाईलाई मनपर्ने एक छान्नु आवश्यक छ। तपाईंले सहभागी हुन चाहनुभएको कार्यक्रमले व्यक्तिको रूपमा आफ्नो उद्देश्य बुझ्न सहयोग पुर्याउँदछ। कुनै पनि तर यो तपाईले तपाइँको चुनेको क्षेत्रमा उपलब्धिको कदम उठाउन सक्नुहुनेछ।
तपाइँ कसरी सिक्नको लागि दुई छनौटहरू छन्। एक छुटकारा सावधानी हो जहाँ तपाईं कम नगद तिर्नु पर्ने छ र अर्को एक महान सभ्यता संग सभ्य किस्त संग जोडने छ। स्वयं-सिक्नको स्थितिमा, कलेजले विशेषज्ञलाई तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्नको लागि पाठ्यक्रम समाप्त गर्न उच्च आत्म प्रेरणा चाहिन्छ। तपाईले तपाइँको सल्यस्तर स्तरको रूपमा संकेत लगाउन सक्नुहुनेछ।
चाहे तपाईंले वेब आधारित सिक्नु भएको वा एक कलेजमा सामेल हुनुभयो भने, सही संगठन छान्नुहोस् तपाईंको विकासको लागि आवश्यक छ। तपाईं आधिकारिक रूपमा पाठ्यक्रम लिनुभएको साथीहरूको भावनाहरू त्याग्न सक्नुहुन्छ। बन्द मौकामा तपाइँ एक सामान्य पाठ्यक्रममा सामेल हुदै हुनुहुन्छ, पहिला चयन गर्नुहोस् जहाँ क्षेत्र हुनुपर्छ। घटनामा तपाईंले भारतमा कुनै पनि सूचना विज्ञान पाठ्यक्रमको बारेमा विशिष्ट हुनुहुन्न, तपाइँ राष्ट्र बाहिर सबै भन्दा उत्कृष्ट कलेजहरू लिन सक्नुहुन्छ। अभिनव प्रौद्योगिकी समाधान भारतमा साथै संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके र अष्ट्रेलिया जस्ता अन्य देशहरूमा कर्पोरेट प्रशिक्षण साथै गुड़गाँव, दिल्ली, बङ्गलोर, नोएडाका व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ।
एक कोर्स लिन चाहने मानिस सामान्यतया चीजहरूको बारे मा जान्छ। माथिको विनिमयले तपाईंलाई जानकारी विज्ञान प्रमाणीकरणमा छनौट गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईका लागि योग्य हुनुहुन्छ।
डेटा वैज्ञानिक प्रमाणित विशेषज्ञ कसरी बन्यो?